Kooxda Barcelona oo raaceysa wadadii ay kula soo wareegtay Coutinho, si ay u hesho saxiixa Pogba – Gool FM
(Barcelona) 13 Agoosto 2018. Wargeyska Daily Telegraph ayaa wuxuu shaaca ka qaaday maanta oo isniin ah qorshaha uu ku doonayo macalinka kooxda Barcelona Ernesto Valverde inuu kula soo saxiixdo xidiga kooxda Manchester United ee Paul Pogba.
Barcelona ayaanan dooneynin inay ka niyad jabto saxiixa paul pogba, waxayna doonayaan inay u raacaan wadadii ay kagala soo wareegeen Philippe Coutinho Liverpool suuqa bishii January ee lasoo dhaafay.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in maamulka kooxda Barcelona ay ku fikirayaan in markale ay dib ugu laabtaan wada hadalada kooxda Manchester United, bisha January ee soo aadan, si ay kaga soo qaataan Pogba, waxayna diyaar u yihiin inay dib u soo celiyaan isla sheekadii ay Liverpool kaga soo qaateen Coutinho.
Barcelona ayaa isku dayday saxiixa xidiga reer France ee Paul Pogba si ay kaga soo qaadato Manchester United inta lagu jiro suuqan xagaaga, laakiin jawaabaha Red Devils uu hogaaminayo Jose Mourinho ayaa noqotay mid diidmo ah.
Waxaa xusid mudan inuu jiro khilaaf u dhexeeya Jose Mourinho iyo laacibka reer France ee Paul Pogba, taasoo ku qasabtay laacibka inuu ku fikiro ka dhaqaaqista kooxda labo sanno ka dib imaatinkiisa garoonka Old Trafford.
Mid kamid ah saxiixyada cusub ee Real Madrid oo la xaqiijiyay inuu seegayo Super Cup-ka yurub